Sida Isu-xoqidda Induction ay u shaqeyso
Kala-soocista Induction waa geedi socod diyaarin diiran.Mareeraha soo-saarista induction wuxuu u diraa is-bedbeddel hadda iyada oo loo marayo isku-xidhka soo-gelinta, kaas oo soo saara aagga elektromagnetic Goobtani waxay dhalisaa durdurrada loo beddelayo kuleylka marka lala xiriiro waxyaabaha la qabanayo sida birta. Kuleylka ayaa laga soo saaraa hoosta dahaadhka, taasoo keenta in dahaadhku dhaqso u fiiqmo. Habkani wuxuu ku habboon yahay in lagu daaweeyo dusha sare ama meeldhexaadka ah ee ku yaal bogga internet-ka oo uma baahna xadhig.
Nidaamka kala-soocista induction wuxuu xoqin doonaa rinjiga, dahaadhka kale, miridhku culus, daxalka bakteeriyada iyo saliida iyo dufanka dusha korantada ku shaqeynaya (birta birta leh) ee jebinaysa isku xirnaanta isku xidhka ka dhexeeya walxaha iyo waxyaabaha ka soo hadhay etch substrate, kuleylinta ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah iyo xakamaynta taas oo cunaysa tamar yar.
HLQ waxay ku fududeyneysaa baahidaada saarista dusha sare teknolojiyada kale ee kacaanka: Isugeynta Kala-baxa! Qalabka ka qaadista soo-saarista HLQ wuxuu ka saarayaa dharkaaga ugu adag dhismayaasha birta oo aan lahayn buuq ama qashin labaad-oo aad ugu soo degto birta.
Hadaad waligaa jeclaan laheyd sixiro sixir ah si aad uxalliso madax-xannibaadda dharkaaga, HLQ ayaa leh waxa xiga ee ugu wanaagsan. Farsamo yaqaan HLQ ayaa ku dul wareejin kara mashiinkayaga soo-saarista masiibadaada daboolan iyo kala-furista qaar ka mid ah kuwa ugu adag ee laga saari karo daboolka heerarka illaa 10 jeer ka dhakhso badan tiknoolajiyada tartamaya sida sandblasting, maahan wax sixir ah, laakiin tiknoolajiyaddeenna soo-saarista soo-saarista ayaa ah mid labaad oo dhow ! Marka farsamayaqaanada HLQ ay madaxyada indha indheynta u dhaqaajiyaan dusha sare ee birta, waxay abuurtaa kuleyl ku filan (sida caadiga ah 300 illaa 400 darajo) si dhakhso leh looga xiro inta badan dahaadhyada taangiyada, booyadaha, dhuumaha, maraakiibta iyo dhulalka ka baxsan, taasoo u oggolaanaysa daahan (illaa 1-dhumuc dhumuc leh) in looga saaro go'yaal.
RPR Ka saarista Kuleylka Kuleylka Kuleylka
RPR saarista daahan kuleylka kuleylka wuxuu ku shaqeeyaa mabda 'induction. Kuleyl ayaa laga soo saaraa birta birta iyo isku-xidhka birta iyo isku-dhafka ayaa jaban. Dahaadhka ayaa markaa gebi ahaanba laga saarayaa iyada oo aan la kala goynin oo gebi ahaanba laga nadiifin karo walxaha wasakhaynaya, ie. warbaahinta qaraxa. Tani waxay ka dhigeysaa qashin-qaadista iyo dib-u-warshadaynta qashinka mid fudud oo kharash badan.
Isticmaalka awoodda ugu yar xitaa daboolka ugu adag uguna adag ayaa gebi ahaanba laga saari karaa. Soo-saarista Kuleylka ee RPR waa ka dheereeyaa hababka caadiga ah. Qaabka aamusnaanta ah ee saarista daahan macnaheedu waa in injineeradeennu ay shaqeyn karaan maalin iyo habeen iyagoo aan lahayn wax wasakheyn buuq ah.
Sababtoo ah faa'iidooyinka badan ee geedi socodka kuleylka kuleylka, waxaan awoodnay inaan siino macaamiil badan oo Alliance ah adeegga ay u baahan yihiin. Waxaan lashaqeynay macaamiisha warshadaha sida:
Falanqaynta cuntada & cabitaanka
Tafaariiqda iyo adeegyada cuntada
Huteelada & martigalinta
Barkadaha ganacsiga iyo aquariumyada
HLQ-da habka-kala-bixinta isku-xidhka daanka ayaa soo saara inta badan noocyada daahan, oo ay ku jiraan:
Dhuxusha Daamurka Dhuxusha
Ka hortagga dabka Chartek ama waxyaabaha kale ee la isku qurxiyo
Si dhakhso badan, Aamusan, Nadiif ah, Diyaargarowga Dusha sare ee Nabdoon
Qaarkood waxay dhihi karaan qashin-qubka induction waa habka "dhakhsaha iyo wasakhda" ah ee shaqada lagu dhammayn karo, laakiin run ahaantii way deg deg badan tahay, oo iskuma qasna. Sababtoo ah ka-goynta induction ma abuurayso qashin labaad, nadiifinta waa la fududeeyay. Wax ka qabashada go'yaasha ama xarkaha dahaadhka ayaa si aan dhammaad lahayn uga fududaan wax ka qabashada warbaahinta qaraxa iyo boodhka.
Xaalado badan, xakamaynta waa la fududeyn karaa ama waa la wada baabi'in karaa. Bal qiyaas ka takhalusida mashruuc dhismeedka xajinta iyo xakamaynta oo qaali ah oo aad ku beddelayso wiish snorkel ah iyo maro dhibic ah!
Xirfadaha kale waxay ku shaqeyn karaan meel aad ugu dhow HLQ waxqabadyada kala-soocidda induction maxaa yeelay waa nidaam aad u deggan oo aan abuuri doonin buuq foolxun oo carqaladeeya wax soo saarka qandaraasleyda kale ee laga yaabo inaad ka shaqeyneyso mashruucaaga.
Qalabkayaga qashin-qubka indha-indheynta ma laha qaybo dhaqdhaqaaq sameeya, taas oo ka dhigaysa geeddi-socodkeennu mid aad uga ammaan badan biyo-shubashada ama sandblasting ee loogu talogalay shaqaalahaaga, qandaraasleyaasha kale, macaamiisha iyo kuwa soo dhaafaya.
Mashiinka Daaweynta Induction & Nidaamka Rinjiyeynta Rinjiga Induction & Nidaamka Soo-saarista RPR
Categories Technologies Tags kuleylka ka saarida maqaarka induction, Faafin induction induction, qaawinta kuleylka induction, Ka saarista rinjiga induction, Ka jarista rinjiga induction, Nidaamka PRP induction, nidaamka induction RPR, Ka saarista miridhku induction, Xadgudubka miridhku induction, Ka-jarista, Nidaamka qashin-qubka, ah.RPR Post navigation